Mamwe Mapositori Orapisa Vana Vavo
Kurume 22, 2010
Apo chirwere chegwirikiti chiri kunzi chauraya vana vanopfuura zana, vamwe vatendi vechechi yekwaJohanne Marange, kuChimanimani mudunhu reManicaland, vanoti vave kubayisa vana vavo nhomba senzira yekudzivirira chirwere ichi, kunyange hazvo zvisingaenderane nechitendero chavo chechipotsori.
Vamwe amai vanopinda chechi yekwaJohanne Marange kuChimanimani, avo vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti vakarasikirwa nevana vaviri pavana vavo vatanhatu nechirwere chegwirikwiti.
Amai ava vanoti pakarwara mwana wavo wekutanga, vakaenda naye kuchechi yavo kuitira kuti anonamatirwa. Vanoti vakapihwa mvura yekushandisa, iyo yakanga yanamatirwa. Asi izvi hazvina kubatsira. Vanoti pavakadzokera kuchechi kunoudza vakuru vavo, kuti mwana wavo akanga afa, vanoti vakanzi mwana wavo akanga afa nepamusana pekuti vakange vasina kushandisa nemazvo mvura yavakapihwa.
Amai ava vanoti mushure mekunge mumwe mwana wavo arwara zvakare negwirikwiti, vakaita zvimwe chetezvo, vakanopiwa mvura yakanamatirwa yekushandisa. Asi mushure memazuva mashoma, mwana akabva afa zvekare. Vanoti vechechi yavo vakavapomera mhosva yekuita zvehupombwe, vachiti havana kureurira, izvo zvakapa kuti mwana wavo afe.
Mudzimai uyu anoti pakafa mwana wake wechipiri, ndipo paakadzamisisa pfungwa dzake ndokuona kuti akasachenjera, vana vake vose vaizopera kufa. Mudzimai uyu anoti akaenda nevana vake vana kuchipatara chiri pedyo, ndokuvabayisa majekiseni, kuitira kuti vasabatwe nezvirwere.
Amai ava vanoti nekuwanda kuri kuita zvirwere mazuva ano, mubereki wose anofanirwa kuona kuti aendesa vana kuchipatara kana vachinge varwara.
Imwe nhengo yemapositori kunyanyadzi, VaIsreal Vondo, vanotiwo pavakangoona vamwe vana vachipera kufa negwirikwiti, vakabva vamhanya kunobayisawo vana vavo.
VaVondo vanoti vanotoziva vamwe vanhu vazhinji vemuchitendero chavo vari kuendesawo vana vavo kuzvipatara, asi vachizoreurira kana vaenda kumasowe.
VaVondo vanoti kunyange hazvo vachibvuma kuti muchitendero chechipotsori mune simba rakawanda zvikuru, vanoti nyaya yekusaenda kuzvipatara yave kufanirwa kushandurwa sezvo zvinhu zvachinja mazuva ano. VaVondo vanoti nenyaya yezvitadzo zvawanda munyika, mwari havachaita mapipi avaisimboita kare.
Mumwe wechitendero chemapositori, Amai Ruth Sigauke, vanotiwo kune zvimwe zvirwere zvinoda kurapwa pamweya, nezvimwewo zvinoda kurapwa panyama pachishandiswa mishonga inopihwa navana chiremba.
Mukuedza kupedza chirwere chegwirikwiti, sangano reUNICEF, richishanda pamwe nehurumende, riri kufamba richibaya vana munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi vamwe vechipotsori ava vanonzi vari kutiza nevana vavo, kuitira kuti vasabayiwe. Vana hutsanana vanonzi vari kufamba nemapurisa kuChimanimani, vachimanikidza mapotsori aya kubayisa vana vavo.
Asi gurukota rezveutano, VaHenry Madzorera, vanoti hurumende haimanikidzi mapositori kubayisa vana vavo. VaMadzorera vanoti pari zvino hurumende iri kugadzira mutemo unosungira munhu wese kuti ange achirapisa mwana wake.